TV Qaranka Oo Qayb Weyn ka Qaata Ka Aamin Baxa Xukumada Siilaanyo iyo Koboca Mucaaridada Oo ay Kow Ka Tahay Codka Aaan Dheelitirnayn
Bal daawo TV Qaranka, iskuna day in aad ka hesho war sugan oo dheelitiran oo ka waramaya dhacadooyinka dhabta ah ee ka oogma Somaliland, ha noqdaan kuwa sida bulsho ka cabanaysa biyo la’aanta ku habsatay, amaba muranka siyaasadeed ee xukumada iyo xusbiyada siyaasiga ah ee sharciga ah ee dastuurku dhigayo in ay naqdiyaan xukumada talada haysa. Sidoo kalena booqo goobaha bulshadu iskugu timaad sida makhaayadaha iwm, iskuna day in aad la daawato bulshada warka TV Qaranka Somaliland, waxa markiiba aad arkaysaa iyadoo dadku uga wareegayaan TV-yada madaxbaanaan ee markaasi ay og yihiin in ay ka helayaan wararka TV Qaranku isku dayayo in uu bulshada ka idho-saabo ee markaas ee oogan “Waar inaga badala” waa erayga caanka ah ee xiliyada wararku soo galaan ee la adeegsado markuu soo galo wark TV Qarank Somaliland.
TV Qaranka oo saddex sano ka hor ay gacanta ku yahaysay xukumadii UDUB ee uu hogaaminayey Daahir Riyaale, waxa aad uga caban jiray xusbiga hadda talada haya maanta ee Kulmiye oo mucaarid. Xiligaas waxa ay mar walba Kulmiye iyo hogaankiisii oo uu Axmed Maxamed Siilaanyo kow ka yahay ka caban jireen in codkooga la diiday in la baahiyo TV Qaranka iyo Radio Hargeysa, isla markaana uu u xagliyo xukumadii Riyaale. Waxa xiligaas xusbiga Kulmiye muciinsaday, isla markaana marin jiray fariimihiisa siyaasadeed saxaafada xorta ka ahayd tii uu ka cabanayey ee UDUB gacanta ku haysay, waayo sida maanta mucaaridkii shalay ee ay ahaayeen looma ogolayn in xusbi mucaarid ah maanta iyo cid xukumada siyaasiyan dhaliilaysaa fursad loo siiyo in ay fariintooda mariyaan TV Qaranka, Radio Hargeysa iyo wargeyskii la odhan jiray Maandeeq oo haatan loo bixiyey Dawan.
Intaa wax dheer iyadoo xusbiga Kulmiye uu markii ugu horaysay taariikhda Somaliland taageeraysaashiisa iyo maamulkiisuba isku kaashadaan in ay yeeshaan idaacadii Horyaal oo ay ka gudbiyaan fariimaha siyaasadeed iyo dhaliilihii ay u hayeen xukumadii UDUB ee xiligaas isku garbo-duubtay TV Qaranka iyo warbaahintii kale ee gacanta ugu jirtay.
Haatan waxa muuqata sidii iyadoo xukumada Siilaanyo waayo arag u leh sida ay u kordhiso mucaaradada saxaafad gacan-bir ah lagu qabto oo looga caago lidka siyaasiga ah ee dastuur wada wadaajiyey hay’adaha qaranka, ayaa haatan u muuqata mid iyadu haysa dariiqii UDUB iyo xukumadii Riyaale, waxayna kobcinaysaa mucaaridada wajahaysa marka ay u adeegsato warbaahintii Qaranka cabudhinta xaqiiqada jirta, isla markaana isku daydo in ay dhaleecayso saxaafada madaxabanaan ee iyadu fashilisa tabaha hore loo soo maray ee bulshadu moodaysay in ay ka gubayaan maadaama xukumada Siilaanyo balanqaadi jirtay in saxaafada qaranku dheeli tirmidoonto marka ay xukunka qabtaab, taas oo ah arin hawda loo diray oo lagu dafiray sifo fulanimo.
Dhanka kale, arinta gacanta-bir ah ee ay xukumada Kulmiye ku haysato saxaafada qaranka oo ah haddii Somaliland tahay mid dumuquraadi ah in ay si siman uga dhaxayso dhamaan bulshada iyo dhinacyada siyaasada, ayaa waxa ay jaha wareer ku riday dhamaanba saxafiyiinta ka hawlgala warbaahinta qaranka, waayo waxa ay la dawakheen maxaa ay siidayn karanaan, maxayse aanay siidayn karin. Marar badana
saxafiyiinta ka hawlgala kuwa qaranka ee kala duwan, waxa ay la kulmaan hanjabaado in shaqada laga joojidoono iyo in haddaba wararka iyo barnaamijyada ay soo diyaariyaan aad loo-faaf-reebo, lagana hurgufo waxybaabo laga baqayo in ay siyaasiyan waxyeesho xukumada Kulmiye ee Siilaanyo hago. Heerka gacan ku haynta iyo faafreebka aan xadka lahayn oo aan ku koobnayn idaacad iyo tv qaranka ayaa hadda maraya heer la faafreebo xubno isla xukumada iyo xusbiga Kulmiye ka mid ah oo loo arko in ay ka raad-baydheen inta ku dhadhow madaxtooyada ee iyagu u heelan in bustaha laga saaro oo indhaha iyo dhagah bulshada Somaliland aanay arag ama maqlin dhaliisha siyaasadeed ee ku wajahan Xukumada.
Tusaale ahaan, waxa dhawaan kulan balaadhan iskugu yimid saddexda xusbi qaran ee Somaliland, kuwaas oo ku heshiiyey in la soo afjaro murankii siyaasadeed ee ku aroorayey in la qaban karo dood-qaran iyo kale, kulankaas kadib waxa ay saxaafada la horyimaadeen in ay doodii-qaran ku wareejiyeen hay’ada cilmi-baadhista Somaliland oo ay iyadana maxdeeda sarsare kulankaas ku weheliyeen xusbiyada. Warkan waxa sida idaacadaha madaxa banana laga siidaayey radio Hargeysa iyo TV Qaranka, hase haatee maalmo kadib waxa soo baxay in aan madaxtooyada laga soo dhaweyn kulankaas lagu shaaciyey in dood-qaran la qabanyo, waxaana isla wariyihii iyo masuulkii ogolaaday in TV Qaranka warkaas laga sii daayo laagu hanjabay in aanu ‘waxaas oo kale siidayn’ haddii uu markale siidaayo xilka waayidoono, waxana lagu wargaliyey in ay aad ugu fiirsadaan wararka ay siidaynayaan gudoomiyaha Kulmiye Muuse Biixi Cabdi iyo Maxamed Kaahin Axmed, oo xukumada Siilaanyo ku raacsanayn go’aankii ay mucaaridka la qaateen ee dooda-qaran.
Ogow faafreebkii lagu hayey wararka xusbiyad mucaaridku isla xusbigii iyo xukumadii la isku tirinayey ayaa ay saamaysay, waayo sobobtu waa furfurnaan la’aan siyaasadeed oo baqo ku jiro oo heerkaa gaadhsiiyey in xukumadu xusbigeedii ku samayso faaf-reeb.
Waxa xusidmudan in warbaahinta qaranku wada lee yahay, sida TV Qaranka oo magaciisuba uu ku jiro erayga Qaran, in ay iyaguna xusbiyada mucaaridku uga hadheen xukumada Siilaanyo ee garanaysa mucaarid waxa uu mudan yahay si loo helo dumuquraadiyad taama oo Somaliland ka hirgasha. Garashadaas oo ay is-diidsiinayso ama aanay u lahayn geesinimo ay ku aqbasho badalka wixii ay soo mudatay xiligii ay mucaaridka ahayd.
Markase la isku soo duubo, qaabka uu wax u baahiyaan TV Qaranka iyo Radio Hargeysa oo ah labada saamaynta weyn ku leh bulshada daawata ama dhageysata, waxa ay dhamaan qayb laxaadleh ka qaataan koboca mucaaridada xukumada Kulmiye ee Siilaanyo hagayo, waxaana soo korodhay aaminaad kabax wararka ay baahiyaan oo dhamaan xiliyada wax oogan yihiin laga qariyo bulshada Somaliland ee moodaysa in TV iyo idaacada Qaran oo ay ahayd in ay dhex ka ahaadaan siyaasada iyo siyaasiga kala jiidanaya bulshada horeba nidaamka xusbiyada ee ku dhisan mucaarid iyo muxaafid ay isku dhageystaan.
Waxase marag ma doon ah in TV Qaranku kow ka yahay kobinta mucaaradada sii xoogeysanaysa ee ku wajahan xukumda Siilaanyo oo si cad u burisay balanqaadkii ay umadda u gashay ee ahaa in ay xoojintoonto saxaafada xorta ah , ta qarankana aanay ahaandoonin sidii tii UDUB, balse taa badalkeeda noqotay xukumadii dagaalka ugu balaadhan ku qaatay saxaafadii u hiilisay xiligii ay ku mucaaridaysay UDUB oo ay maanta iskaga xusul-duubtay saxaafada qaranka ee TV Qaranku ka kow yahay. Barina maxay inoo sheegi, maantaba waxay beeniyeen waxay shalay inoo sheegeen, waxayna galeen halkii UDUB iyo xukumadii Riyaale iyo siday ku ahaayeen mucaaridkii shalay ee Kulmiye kow ka yahay. Maamulka TV Qaranka ee Hargeysa oo ah xudunta baahintiisu qaabkan uu u wado waa ka difaac laakiin waxaanu dareensanayn in ay sumacada xukumada ay isle yihiin ku difaaca u soo jiidayaan mucaaradad badan leh meelo kale oo ay ka helaan wararka ay bustaha saarayaan, kuwaas oo ka badan shaashada kaliya ee TV Qaranka .